Ciidamo weli lagu weysan yahay dagaalkii ka dhacay deegaanka Birta Dheer ee duuleedka Garbahaarey – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamo weli lagu weysan yahay dagaalkii ka dhacay deegaanka Birta Dheer ee duuleedka Garbahaarey
Ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa in weli lagu weysan yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen, kadib dagaaalkii dhawaan ka dhacay deegaanka Birta Dheer ee duuleedka Garbahaareey ee gobolka Gedo.
Ciidamadaasi oo ka mid ahaa kuwa dagaalka xoogan deegaanka Birta Dheer kula galay dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa la sheegayaa in illaa iyo haatan aan la ogeyn inay nool yihiin iyo inkale.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo oo aynu xiriir la sameeynay ayaa inoo sheegay in tiradda askar ee haatan la weysan yahay ay gaareyso illaa seddax, waxaana ay tilmaameen inay u maleeynayaan inay u gacan galeen dagaalyahanadda Al-shabaab.
Dhinaca kale, taliyaha guutada 9-aad ee qeybta 60-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Cabdoow Cali (Sanka) oo wareeysi siiyay idaacadda VOA-da, ayaa u sheegay in dagaalka ka dhacay deegaanka Birta Dheer uu bilawday subaxii Isniinta marka ay saacadu ahayd 9.30 subaxnimo, islamarkaana uu soo idlaaday 12:00 duhurnimo.
Taliyaha ayaa sheegay in dagaalkaas looga dilay illaa seddax askari oo ka tirsanaa ciidankooda, halka 4 kalena looga dhaawacay, isagoona dhinaca kale tilmaamay inay dileen 12 ka mid ah dagaalyahanadda Al-shabaab, kuwo kalena ay dhaawaceen.
Illaa iyo haatan ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha Al-shabaab, kaas oo ay kaga hadlayaan dagaalyahanadooda looga dilay dagaalka ka dhacay deegaanka Birta Dheer ee duuleedka degmada Garbahaarey.
Al-shabaab ayaa deegaanka Tuulo Barwaaqo ee gobolka Gedo kusoo bandhigay meydadka askar badan oo ay ku sheegeen inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dagaalka kula kala galay deegaanka Birta ee duuleedka Garbahaarey.